Xasan Abshir wuxuu sheegay inay isaga iyo gudoomiyaha baarlamaanku sharci ahaan masuul ka yihiin dhamaystirka arrimaha dib u heshiisiinta oo ay kaalinta madaxweynahooda kaga aaddanina tahay la socodsiin iyo la tashi. Cabadalla Deerow-na wuxuu caddeeyey taageerayaan oo ayidayaan heshiiskii ay madaxda Soomaalidu sabtidii wada saxiixeen. C/Qaasina wuxuu u muuqdaa in ay waxba uga fuli waayeen heshiisyadii uu u yimid Nairobi.
C/Qaasim Xasan Abshir Deerow
Kaddib markii ay hogaamiyayaasha Soomaalidu maalintii Sabtida ku heshiiyeen qodobadii axdiga ku meel gaadhka ah ee ay beryahanba ku muransanaayeen ayaa waxaa heshiiskaas ka biya diidey C/Qaasim Salaad Xasan oo ku tilmaamay mid aysan dawladiisu ayidsanayn sidaa darteedna uusan marnaba aqbali doonin. Dhaleecaynta C/Qaasimna waxay uun dhashay inay maanta gudaha Mbagathi si wada jir ah shir jaraa’id ugu qabtaan ergada rasmiga ah ee DKG ah shirka uga qayb gelaysa, kuwaas oo ay hogaaminayeen Xasan Abshir Faarax iyo Cabdalla Deerow Isaaq. Waxayna war saxaafadeed ay soo saareen isla markaana ay 111xubnood oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan DKG ah ku caddeeyeen inay dawladda ku meel gaadhka ahi si buuxda uga qayb qaadatay diyaarinta iyo ansixinta heshiiskii ay madaxda Soomaaliyeed 5 July isla gaadheen.
Shir jaraa’id oo Raysal wasaaraha DKG ahi hoolka shirarka ee Mbagathi ku qabtay ayuu isagoo ka hadlayey heshiiska uu saxiixay ee ay madaxweyniisa iskaga hor yimaadeen, waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: “Waxaa la soo jeediyey tirooyin kala duwan oo ay xubnaha baarlamaanku noqonayaan 450, 250, 270, 315 & 351. Waxaa kaloo la soo jeediyey 5, 3 & 4 sano ay noqoto muddada ku meel gaadhka ah ee ay dawladda dhalanaysa. Ergada DKG ahi way ogolaatay tirooyinkaas iyo mudooyinkaas kala duwan iyadoo muujinaysa dabacsanaan iyo danayn heshiis la gaadho. Waxaa kaloo la soo jeediyey inay saxiixayaashii heshiiskii colaad joojinta ee Eldoret noqdaan kuwa soo xulaya xubnaha baarlamaanka cusub iyagoo la tashanaya madax dhaqameedyada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ka tirsan ergada wejiga 2aad ee shirka, ergada dawladda ku meel gaadka ahi arrintan way diiddey, waxayna soo jeedisey inay xubnaha baarlamaanka xulaan madax dhaqameedyada Soomaaliyeed iyagoo la tashanaya saxiixayaasha iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed”.
Raysal wasaaraha TNG wuxuu shirkii jaraa’id maanta ka sheegay in markii arrimahaas la isku mari waayey ay Kipligat, xubnaha gudiga farsamada IGAD & wakiilada beesha caalamka ee shirka maal geliya muujiyeen niyad jab iyo quus ay ka taagan yihiin heshiis la’aanta Soomaalida iyo daba dheeraanshaha shirka. Wuxuu xusay in markaa la soo jeediyey xal dhex dhexaad ah oo inshaaraya in xubnaha baarlamaanka laga dhigo 351, muddada ku meel gaadhkuna noqoto 4 sano iyo inay xubnaha baarlamaanka soo xulaan saxiixayaasha iyo siyaasiyiintii markii ugu horaysey shirka lagu marti qaaday, iyagoo la tashanaya madax dhaqameedyada. Wuxuuna ku cel-celiyey inay arrintan ogolaansheheeda u arkeen xal dhex dhexaad ah oo ay dhinacyadoo dhami qaateen. Isagoo arrintaas ka hadlayana Xasan Abshir wuxuu yidhi: “Haddaan nahay DKG ahna waan ogolaanay xalkaas, waana saxiixnay heshiiskaas, anagoo tixgelinayna baahida ay ummadda Soomaaliyeed u qabto inay heshiiso oo dawlad loo wada dhan yahay dhisato. Waxaan sidoo kale tix gelinay wakhtiga dheeraaday iyo kharashka batay ee shirka oo ku dhowaaday in nala noco oo nalaka niyad jabo, iyadoo naloo arko dad aan waxaba ku heshiin Karin”.
Arrinta Somaliland oo uu Xasan Abshir taabtay wuxuu tibaaxay inay in badan dawladaha shirkan gadh wadeenka u ah iyo wakiilada beesha caalamka kala hadleen ayna u xaqiijiyeen inay dawladda halkan ka dhalataa tahay mid Soomaaliya oo dhan u dhalanaysa. Ugu dambayntii Xasan Abshir wuxuu hadalkiisa ku soo gunaanaday inay isaga iyo gudoomiyaha baarlamaanku sharci ahaan masuul ka yihiin dhamaystirka arrimaha dib u heshiisiinta oo ay kaalinta madaxweynahooda kaga aaddanina tahay la socodsiin iyo la tashi.
Cabadalla Deerow Isaaq oo isna shirkan jaraa’id ka hadlay ayaa caddeeyey inay taageerayaan oo ayidayaan heshiiskii ay madaxda Soomaalidu sabtidii wada saxiixeen.
C/qaasim Salaad Xasan oo intuu Nairobi ku sugnaaba dadaal balaaran ugu jirey sidii uu hogaanka ergada DKG ah ula wareegi lahaa ayaa hadda u muuqda mid ay jartu isla rogtey oo ay waxaba uga fuli waayeen dhamaan siyaasadihiisii shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ku aaddanaa.